Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 21aad | Jowhar Somali News Leader
Yaasmiin haddii ay faraxada la duuleyso waxaa dhinaca kale farxada aysan ka fogeyn Falis oo habeen kasta ay u suura gasho in ay aragto midkii ay calmaday ee Yaasiin ahaa walow si toos ah aysan u kulmin haddana.
Yaasiin ayaa caadeystay inuu habeen kasta uu soo galo xaafada Falis iyada oo Falisna habeenkii ay caano ka doonto reer Lo u xeran tahay iyadoo Hooyo Maryan walaalkeed wiil uu dhlay oo feeraha laga helay laga keenay Baadiyo oo ay guriga ku daaweyneyso tani ayaa Falis iyo Yaasiin u ah fursad ay ugu yaraan isku arkaan iyaga oo indhaha iskala hadli jiray waxay tanina labadoodaba u tahay mid ay kala fogaanshaha ku kala dhex jirto fudeyd u siineysay qalbiyadooda isku ooman ee la kala irdeeyey.
Qadar sida caadada ah waxaa dhacda in habeenada qaar uu xaafada dhex galos sidoo kale uu dhalinta xaafada wax badan xaafada ka wareysto waxay xaafada iska soo raaceen Saalax oo ah wiilka ugu dhow dhalinta xaafada oo wax badan uu taakuleeyo markiiba waxa ay u soo ruqaansadeen maqaayada laamiga ku taal oo dhlainta xaafada cidii la doonayo laga baadigoobo oo ah meel fadhi wanaagsan leh oo loo sheeko doonto waxayse wax walba is badaleen markii Qadar ay indhihiisa qabteen Yaasiin oo qeyb maqaayada ka fadhiya markiiba inta uu hajuumay ayaa uu kalarka ka qabtay oo uu soo jiiday isla markiiba dhulka inta uu ku dhuftay ayaa uu laad la dhacay Yaasiin oo fahmi la meesha laga helay ayaa awooday inuu istaago oo markiisana iska caabiyo ninka soo hajuumay markiiba dad ayaa ku soo cararay oo wiilasha kala qabtay Qadar oo ciilka dilayoa ayaa ku yiri.
Dulliyo yaa ku yiri xaafadaan soo gal waa balan in aan nafta yar ee kugu jirto aan kaa saaro.
Yaasiin oo dhiig afkiisa ka socda ayaa yiri
Adaa duli ah yaad is mooday ma xaafadaan ayaa aabaha kuu xureeyey waa kaa haddii aad iga saari kartid balan waaye in lafahaaga jibin doono.
Qadar oo dhiiga ku kacay ayaa inta uu ka soo fara baxday Saalax iyo wiilal kale oo haayey ayaa uu soo abaaray Yaasiin oo mar kale feer laysa dhacay mar kale ayaa la awooday in la kala qabto balse Qadar oo la celin la yahay ayaa yiri.
Balan waaye haddii aan mar kale xaafadaan kugu arko in aan nafta kaa qaadi doono oo aan madaxa kaa toogan doono..
Aabahaa haddii uu lacag leeyahay ma waxaad I moodaa in aan kaa baqayo waa kaa iga celi xaafadaan.
Qadar mar kale ayaa uu awooday inuu ka fara baxsaday dhalintii celcelineysay inta uu qoryo banaanka yaalay oo ay maqaayada shidaneysid uu mid kala soo baxay ayaa madaxa kaga dhuftay Yaasiin markii lagu dhuftay ayaa uu dhulka ku dhacay dhiig badan uu ka baxay Qadar markiiba la qabtay ayaa ku yiri.
I maqal duliyow tani cashar ha kuu noqoto ee yaan mar kale kugu arag xaafadaan
Qadar waaa lagu qanciyey inuu iska baxo intaas Yaasiin dhulka ayaa uu yaalay markiiba in la qaado ayaa la is tusiyey waxaana la geeyey farmashi meesha ka dhawaa waxayna goobta noqotay mid dad badan ay isugu soo baxaan Aabe Warsame oo xaafadiisa ku socda ayaa buuqa ku soo leexday markiiba waxa uu arkay Saalax oo uu wacay oo uu ku yiri.
Maxaa jira Saalax muxuu yahay buuqaan
Adeer ninkii Yaasiin ahaa ayaa dagaal galay
Aaway ma wax ayaa soo gaaray maxay tahay dagaalka uu galay miyuusan xishooneyn
Maya adeer isaga wax ma gaarin balse isaga ayaa wax geystay oo wiilka dhib weyn ayaa ku dhacay
Siduu wiilka wax u gaaray
Adeer dhiig badan ayaa ka baxay iminkana waa la tolayaa
Yaa dhalay wiilka maxayse igu qoomeen
Waa wiil xaafada ku cusub walaahi ma aqaan waxa ay isku qoomeen
Aaway Qadar hadda
Inuu Xaafada aado ayaan ku qanciyey inuu baxay ayaan moodaa
Adeer wiilkaas arrintiisa ayaan kugu ogahay dhamaan qarashka farmashiyaha ii soo sheeg ee kaxee ee xaafadiisa geey ina soo ogow cida dhashay iyo meesha uu ka yimid adiga ayaan kugu ogahay wiilka daawana u sii iibi.
Haye adeer balse Qadar celi yuusan nagu soo noqon
Ha ka cabsan hadda ayaan daba kacayaa ee sidaa yeel adeer
Qadar guriga ayaa uu ku laabtay isaga oo cidii aragtaba fahmi kartay inuu buuq soo galay Falis ayaa aheyd cida kaliya ee aragtay oo ka naxday carada ka muuqatay markiiba cabsi aysan fahmin ayaa Falis gashay waxayna jikada ugu soo gashay Yaasmiin oo ay ku tiri.
Yaaka Yaaska ninkii Qadar ahaa inuu dagaal soo galay ayaad filayaa.
Aaway halkuu joogaa
Qolkiisa ayaa uu galay waad ka naxeysaa weljigiisa carada ka muuqata
I maqal Falisey ninkaas arrimahiisa ka baxo xanaaq kasta oo ka muuqda maxaa kaa galay xataa wejigiisa ha fiirin waa haddii aad ku amaan helaysay ka fogaaw ayaan ku dhihi lahaa waana mid kuu dan ah.
Yuu la soo dagaalay
Oo Maxaa kaa galay maxaase ku daba dhigay ka aamus.
Previous articleGuddoomiye Jawaari oo warqad jawaab ah u qoray Xeer Ilaaliyaha Qaranka (Akhriso)
Next articleAMISOM oo dalbatay dhaqaale dheeraad ah, si looga guuleysto Al-Shabaab